Thutamm, Author at Thutazone - Page 406 of 430
ဟစ်တလာရဲ့ မူရင်းနာမည်က Adof Schicklgruber ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့ရဲ့နာမည်ကို ၁၈၇၇ခုနှစ်မှာ ပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက် Adof Hitler လို့ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပါ။ ဟစ်တလာ လေးနှစ်သားအရွယ်က ရေနစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက လာရောက်မကယ်ဆယ်ဖူးဆိုရင် ဟစ်တလာဟာ အဲဒီအချိန်တည်းက...
ကမ္ဘောဒီးယားမြို့လယ်က Tuol Sleng ပြတိုက်ရဲ့သမိုင်း
ဒီနေရာဟာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရဲ့ Phnom Penh မှာရှိတဲ့ Tuol Sleng ဆိုတဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tuol Sleng ဆိုတာကတော့ အဆိပ်ပင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တောင်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ မူလကတော့ Chao Ponhea Yat အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး...
နာဆာ ဆိုတာ အမျိုးသား အကာသနှင့် လေကြောင်းဦးစီးဌာန(National Aeronautics and Space Administration, NASA) ကို အတိုကောက်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရပိုင် အကာသလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရုံးချုပ်ကတော့ အမေရိကန် ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကြီးကို အမေရိကန်...
၁. Mark Zuckerberg ရဲ့နာမည် အပြည့်အစုံက Mark Elliot Zuckerberg ဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါးမှာ သွားဆရာဝန် နှင့် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၂. အသက် (၁၂) နှစ်တွင် ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်များ စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး...
Page 406 of 430 Prev 1 … 405 406 407 … 430 Next